Yakajairwa aruminiyamu mbiya
dhonza mhete korona ngowani
Aluminium epurasitiki chivharo
Nhoroondo yemabhodhoro egirazi muChina
Post nguva: Chivabvu-12-2021
Pakave nemabhodhoro egirazi muChina kubvira kare. Munguva yakapfuura, vadzidzi vaitenda kuti zvigadzirwa zvegirazi zvaive zvisingawanzoitika munguva dzekare, ongororo dzichangoburwa dzinoratidza kuti kugadzirwa uye kugadzirwa kwekare magirazi zvigadzirwa hazvisi zvakaoma, asi hazvisi nyore kuchengetedza, saka hazviwanzo kuona ...Verenga zvimwe »
Ndeapi marudzi emabhodhoro emabhachi aripo zvakateerana？
Post nguva: Kubvumbi-30-2021
Mazhinji mabhodhoro egirazi anotsigira aruminiyamu chivharo, aruminiyamu epurasitiki chivharo, epurasitiki chivharo, chakasiyana chivharo mune chimiro uye zvinhu kune zvakawanda zvakasiyana, kubva pane zvinyorwa zvinowanzo aruminiyamu, PP kirasi uye Pe kirasi. Inonyanya kushandiswa muwaini chena, waini yemichero, waini tsvuku.Verenga zvimwe »
Maitiro ekutamba mitambo nemapepa makapu
Post nguva: Kukadzi-21-2021
Basa rinonyanya kukosha remakapu emapepa kubata uye kunwa mvura, asi makapu emapepa ane zvimwewo zvinoshandiswa. Tinogona kushandisa makapu epepa kugadzira mitambo yakaitwa nemaoko, senge mimhanzi mitambo, mitambo yemitambo, mitambo yesainzi uye mitambo yemapuzzle. Zvinotaridza kuti kugona kwemukombe wepepa kuri chaizvo! Seruva Cheka t ...Verenga zvimwe »
Uri kusaziva uchidya plastiki mazuva ese. Hezvino izvo zvazvinoita kumuviri wako
Inochengetedza kugadzikana kwetembiricha yemvura Kunyangwe kuri kutonhora kana kupisa, mabhodhoro egirazi anokwanisa kubatirira patembiricha yavo pamatanho ehukama uye mukuita kudaro, zvakare simbisa kuti kune zero kutora mafirita kana mavara kubva mumudziyo wakataurwa. Kurumidza kwakachena uye kwehutsanana girazi remvura b ...Verenga zvimwe »
Mukurwira kwedu kushandiswa kwepurasitiki, vazhinji vedu takachinjira kumabhodhoro egirazi. Asi mabhodhoro egirazi kana makontena akachengeteka kushandisa here? Dzimwe nguva, mamwe emabhodhoro egirazi anogona kupedzisira ave kukuvadza kupfuura iyo PET kana purasitiki pachayo, anoyambira Ganesh Iyer, wekutanga anozivikanwa mvura sommelier yeIndia ...Verenga zvimwe »
Nei yedu aluminium cap yakafarirwa
Mhando yepamusoro Zvigadzirwa hazvipatsanurike kubva pahunhu uye runako rwechigadzirwa icho pachangu.Our aruminiyamu makapu akagadzirwa nemhando yepamusoro mbishi zvinhu. Mushure mekuongororwa nemuchina, ekupedzisira asara akanaka kwazvo zvigadzirwa.Ipapo shandisa advanced technology technology yekugadzirisa uye kugadzira ...Verenga zvimwe »